Akaakuu hunda | Akaakuu
Adaba Guyyaa Cidhaa
SEENAA QUR'AANA KEESSAA
Hanga maalimaa 308
Barnoota imaanaa kutaa 3
Barnoota imaanaa kutaa 2
Barnoota imaanaa kutaa
Barnoota Iimaanaa Kutaa 1
HUNDEELEE SADANIIFI RAGAA ISII
Kitaabni kuni barnoota aqiidaa kan bu'uraa kan namni hundi baruu barbaachisu uf keessaa qaba.
Jaartii heddummeessuu moo sanyoo heddummeessuu?
Olola warren maalummaa islaamaa hin hubatin hafarsan keessaa islaamummaan dubartii xiqqeessuuf afur fuudhuu hayyame jedhan. Fiilmii kana keessatti waayee kanarratti dhugaa jiruutu ibsame. Akkasuma kabajaa dubartiin gaaddisa islaamaa jalatti gonfatteetu ibsame. Akkamitti akka qaroominni jaarraa kanaa dubartii kabajaa irraa mulqitee meeshaa daldalaa isii fakkeessiteenis ni ibsama.
Beekkomsa 10n dinqisiisaa waayee masiih Islaama keessatti kan ati hinbeeyne
Kuni beekkomsa hubannoo 10 Kan sadarkaa masiih islaama keessatti qabu ibsuudha. Nama dhugaan masiihiifii haadha isaa Maryam jaalatuuf dhiheessina. Kuni raga muslimtoonni isaan kana lameen jaalachuufii kabajuuti. Kanaan malee iimaanni muslimaa hinguutamu. Barnoonni kuni Nama haqaa yaadu hunda -akka muslimtoonni nama kamiiyyuu caalaa masiih jaalataniifii kabajan-nihubachiisa. Jaalalli masiih kandhugaa gama islaamummaa akka oofee nugeessu beekamaadha.
Sagantaa kana keessatti gorsi adda addaa kan qur’aanaa fii hadiisarraa walitti qindaawe dhihaatee jira. Sagantaan kun qooda 2 qaba.
Sagantaa kana keessatti badiileen gurguddoon irraa dhoowwamne tarreeyfamteeti jirti, hammeenyi isiitis ibsameeti jira. Akka namni hundi hubatee irraa fagaatuuf jecha.
Sagantaan kun waayee firummaa maxxansuu mata duree jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.
Sagantaan kun waayee akkaataa hojii umraa itti gaggeeffamu jalqabarraa hanga dhumaatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.Sagantaan kun waayee akkaataa hojii hajji barnoota gayaa uf keessaa qaba.
Barnoota Hajjiifii Umraa (Kutaa 1ffaa)
Sagantaan kun waayee sababaa injifannoo waan jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.
Milkii Fii Hobbahuu
Sagantaan kun waayee milkii fii hobbahuu mata duree jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.
BARRUU WAA'EE SOOMAAFI ZAKAA
Kitaaba kana keessatti barruu lamaatu jira. tokkoffaan barnootaa waayee akkaataa zakaa ittibaasaniifii waan zakaan irraa baafamu. kan lammaffaa seera soomana ramadaanaattu ibsama.
SEENAA NABIYYII GAAFI440 FI DEEBISAA
Kitaabni kuni siiraa (seenaa nabiyyii) sallaahu aleyhi wasallam bifa gaafifii deebisaatiin ibsa. Gaafiifii deebii 440 uf keessaa qaba.
Seera Hajjiifii Umrah
Kitaaba kana keessatti barnoota hajjiifii umraattu bifa gabaabaan dhihaata. suuraaleen gargaaramee nama hubachiisa.
Aqiidaa Ahlussunnaa wal Jamaa’ah
kitaaba kana keessatti barnoota bu’ura aqiidaa sirrooftuu muslimtootaattu ibsame.waayee towhiida Rabbiitii fii maqaleefii sifaata isaa keessatti ibsa guddaa qaba. Ragaalee qur’aanaafii hadiisaarratti hundaawuudhaan.
Kitaaba kana kaeessatti aqiidaa ahlusunnati waljamaa'ah ttu dhihaate. Gareelee jallattee fii jallinna isiitis nidubbata, deebisas irratti nikenna.